Digimind: Falanqaynta Warbaahinta Bulshada ee Shirkadda | Martech Zone
Digimind: Falanqaynta Warbaahinta Bulshada ee Shirkadda
Sabti, Agoosto 27, 2016 Sabti, Agoosto 27, 2016 Douglas Karr
Digimind wuxuu hogaaminayaa kormeerka warbaahinta bulshada SaaS iyo shirkada sirdoonka ee tartanku ka dhexeeyo oo ay ka faa'iideystaan ​​shirkadaha shirkadaha iyo hay'adaha la shaqeeya. Shirkaddu waxay bixisaa xalal badan:
Digimind Bulsho - fahamka dhagaystayaashaada, cabirida suuq geyntaada bulshada ROI, iyo falanqaynta sumcadaada.
Waxgaradka Digimind - waxay bixisaa tartan iyo la socoshada warshadaha si aad u sii odoroto isbeddelada suuqa iyo aqoonsashada fursadaha ganacsiga.
Xarunta Taliska Bulshada - xarun bandhig-waqtiga-dhabta ah si loogu muujiyo muuqaalkaaga sumcadda bulshada.
Iyada oo loo adeegsado Digimind Social, waad ku kormeeri kartaa, falanqeyn kartaa, ku lug yeelan kartaa, ku soo sheegi kartaa, ku cabbiri kartaa ROI, kuna maamuli kartaa sumcaddaada internetka.
Digimind waa mid u gaar ah inay shuraako la noqdeen Ditto oo ku dhajiyay nidaam aqoonsi muuqaal ah qalabkooda, iyagoo siinaya noocyo fursad ay ku kormeeraan tixraacyada bulsheed ee laga yaabo inay noqdaan kuwo muuqaal ah iyadoon qoraal lagu xusin!
Horumarkan waxaa loo isticmaali karaa dhowr siyaabood:
Falanqaynta waxqabadka kafaala qaadis ama iskaashi inta lagu jiro muusig, isboorti ama dhacdo dhaqameed, iyo sidoo kale cabir soo-saarista sumadda marka la eego qoraallada muuqaalka ah ee aan ku xusin sumadda qoraal ahaan.
Soo hel saamayn cusub jaaliyadaha ama danjirayaasha astaanta u leh ee soo dhejiya sawirada astaanta laakiin ha ku xusin qoraalka.
Fahan cad ka hel caadooyinka macaamiisha iyo dareenka dhinaca alaabada iyo adeegyada.
Ilaalinta sumadda kahortaga khayaanada, sida alaabada been abuurka ah, oo markaa yareyneysa dhibaatada iman karta.
Sirdoonka Tartan Bulsho
Bulshada Miisaanka - Hel marin buuxa oo ah Twitter Firehose, Pinterest, Instagram iyo dhammaan shabakadaha waaweyn ee bulshada oo leh in ka badan 120 milyan oo xog ah oo lala socdo maalin kasta.
Kormeerka Sare - Hel marin u helida qalabka soo saarista, gurguurta sirdoonka, ilaha sirta lagu ilaaliyo iyo shabakadda aan la arki karin.
Qodaalka Qoraalka - Teknoolojiyada farsamaynta luqadda dabiiciga ah ee ku saleysan barashada mashiinka iyo matoorada falanqaynta macnaha ee kala soocida otomaatiga ah iyo ogaanshaha dhacdada
Falanqaynta waqtiga dhabta ah - falanqaynta waqtiga dhabta ah ee xogta taariikhiga ah oo leh 14 matoorro falanqeyn gaar ah.
Wadashaqeyn & Bulsho - Maareynta mashaariicda caalamiga ah ee kooxaha dhammaan noocyada leh maaraynta xuquuqda, hababka bulshada iyo astaamaha iskaashi.
Dhibbanayaasha - Wargeysyada, warbixinnada daabacan, digniinta, liisaska daawashada, bogagga - labadaba miisaska iyo mobilada (oo ay ku jiraan iOS iyo Android).
Sony waxay u dooratay Digimind waxqabadyadayada warbaahinta bulshada sida qalabkooda loogu talagalay shuruudahayaga, oo ay weheliso macaamiil xoog leh iyo waqti deg deg ah oo ku saabsan codsiyadayada. Tan Khim Lynn, Maareeyaha Ganacsiga ee Sony
Bilaw Maxkamad Digimind Bilaash ah
Tags: digimindsirdoonka digiminddigimind bulshodittoshaybaarada dittoxarunta taliska bulshadaganacsiga bulshadaaqoonsiga sawirkawaqtiga dhabta ah falanqaynta warbaahinta bulshadaxarunta taliska bulshadawarbaahinta bulshadafalanqaynta warbaahinta bulshadakormeerka warbaahinta bulshadatabinta warbaahinta bulshadamacdanta qoraalka bulshadaqoraalka macdantadhageysi muuqaal ah
11 Ku Dhaqanka Emailka Oo Liita Si Aad Uga Fogaato Ilaa Aad Doonaysid Macaamiil Cadhooday
6 Dhaqannada ugu Fiican ee Kordhin doona Ka Qaybgalkaaga Sahaminta Macaamiisha